कसरी सम्भव भयो एमाले-माओवादी एकताको अध्याय ?
काठमाडौं १६ असोज– एक महिना अघि सम्मपनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेलाई सिद्धाएपछि मात्र माओवादी पहिलो पार्टी बन्छ भन्दै थिए । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा कांग्रेससंग तालमेल गरेका प्रचण्डले कांग्र्रेससंगको सहकार्य दूरगामी महत्वको रहेको बताउदै आएका थिए ।
त्यसैकारण हुनसक्छ एमालेसंग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताबारे छलफल गर्न माओवादीले प्रचण्ड सहित तीन जनाको समिति बनाएकोमा माओवादीका कार्यकर्ता र प्रसंशकहरु आश्चर्य मानिरहेका छन् । कतिपयले त आकार लिइनसकेको वामपन्थी एकीकरणप्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।
विगतमा ‘भ्यागुताको धार्नी’ भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको वामपन्थी एकता कति सम्भव हुनेछ भविष्यले बताउनेछ । तर तत्कालका लागि भने एमाले र माओवादी सहकार्यले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिएको छ ।
नेपालमा एउटै मात्र कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो, तर व्यबहारमा त्यसो हुन सकिरहेको थिएन् । बेलाबखत प्रचण्ड स्यमले पनि वामपन्थी एकताको कुरा गर्ने गरेका थिए ।
कतिपयलाई आश्चर्य चकित तुल्याउनेगरी हुन लागेको एमाले–माओवादी सहकार्य र एकताका सुत्रधार एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम हुन् । गौतमले लामो समयदेखि ‘असम्भव’ ठानिएको काममा हात हालेका थिए ।
गत संविधानसभा चुनावमा धक्का खाएको माओवादीले पहिलो दल बन्ने आश मारिसकेको थियो । यस्तै निराशाका कारण प्रचण्डले बेला बखत माओवादी बिघठनको कुरा उठाउने गरेका थिए ।
उदेश्य के हो ?
बन्न लागेको वामपन्थी गठबन्धनको उदेश्य प्रष्ट पारिएको छैन, तैपनि आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउनु प्रमुख उदेश्य रहेको छ ।
नयाँ संविधानमा प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन प्रणालीका कारण अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन् । प्रमुख दलहरु एक्ला एक्लै चुनाव लडेको खण्डमा नेपाली राजनीतिका आगामी दशक मिलिजुली ‘म्यादी सरकार’को गोलचक्करमा फस्ने निश्चित थियो ।
मंसिरमा हुने निर्वाचन पछि मुलुक झन झन राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने खतरा बढ्दै गएको कुराप्रति दलका नेताहरु चिन्तित थिए । वामपन्थी तालमेलका लागि यो एउटा कारण हो ।
सधैभरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा अर्थिक विकास हुन नसकेको भनेर राजनीतिक दलको चर्को आलोचना हुने गरेको छ, नयाँ समीकरण बनाएर स्थिर सरकार बनाउने र विकास गर्ने एजेण्डामा दलहरु सहमत भएका छन् ।
कति दीगो होला गठबन्धन ?
एमाले र माओवादीबीच एउटै चुनाव चिन्ह बनाएर चुनाव लड्ने र चुनाव पछि पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ । यद्यपि एमालेसंग पार्टी एकीकरणको प्रस्तावले माओवादी कार्यकर्ता चिडिएका छन, सामाजिक सञ्जालमा ।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एमालेमा एकीकरण भएमा असन्तुष्ट समूह मोहन बैद्य या नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीमा जाने सम्भावना रहन्छ ।
आकार लिइनसकेको वामपन्थी गठबन्धनको कार्यदिशा कस्तो हुनेछ, त्यसले पनि माओवादी कार्यकर्ताको भावी कदमको निर्धारण गर्नेछ ।
गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि बहुदल आवस्यक हुन्छ, तर विकासका लागि धेरै दल आवस्यक हुदैन । विश्वका कयौ विकासित देशमा जस्तै एउटा कम्युनिष्ट या प्रगतिशील र अर्को कांग्रेस जस्तो दल भए पुग्छ ।
नेपालमा वन्न लागेको वामपन्थी गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई चलायमान बनाउने चाहिँ पक्का छ । असोज १६, २०७४ मा प्रकाशित